Pane ino peji iwe unowana mutsara wenguva kubva kune yakaitika kare kusimudzira kwesangano risingabatsiri PixelHELPER back kune gore 2008. Izvo zvese zvakatanga nemubairo we Attac - tanga yako yega shanduko kuna Oliver Bienkowski, muvambi wePixelHELPER. Kubva ipapo, mazana emapuratifomu enhau kupota nyika akataura kune edu mapurojekiti.
PixelHELPER mukati mechirevo cheGerman yeDeutsche Welle. TV yeGerman
Bhone.de Vhidhiyo Inokora nezve PixelHELPER Protesitendi
RTL Nhau dzeTV nezve PixelHELPER
PixelHELPER kuratidzira neruoko ruoko rweMambo weThailand pamwe chete naJunya Yimprasert kubva ku ACT4DEM (Act for Demcracy) Finland.
PixelHELPER ane mufananidzo kuGerman Hotel Sonnenbichl Garmisch
PixelHELPER anoratidzira pamwechete Junya Yimprasert kubva ku ACT4DEM (Act for Demcracy) Finland kuHotela Sonnenbichl Garmisch Partenkirchen
PixelHELPER kuratidzira paGarmisch Partenkirchen dhorobha
Manheru manheru show. TV yeGerman
Pepanhau reMorocco Hespress inoshuma nezvekudzingwa kwehurumende yeMoroccan vachipikisa PixelHELPER, kwatinopomera. Sezviri pachena kuvakwa kwedu Uyghuren Holocaust Chirangaridzo kwakanyanyisa kunzwisisika kwehurumende hunyanzvi.
Projection naWikileaks kuBuckingham Palace kwaJulian Assange
Kuderedzwa kwedu patsva panzvimbo yepamhepo Campaign iri kuMoroccan Hespress, pepanhau rakakura kwazvo munyika.
Hafu yemiriyoni vanhu vakaona yedu artwork kuratidza mafambiro eUighurs kuChina pane BBC Arabic. China yakadaidzira kuti chirangaridzo chiparadzwe nekukasira, uye hurumende yeMoroccan yakateverawo.
Nezve 80 Mapepanhau + BBC UK + ChiArabhu zvakataurwa. Haaretz, Israeri
Chiito chakanangana nevashandi vanomanikidzwa uye nhoroondo dzekunyepedzera kuBahlsen
Chirevo chechiedza paHoncaust Chirangaridzo muBerlin pamusoro peBahlsen
Lübeck Nhau: Kununura basa kuMediterranean
Kuita kurwisa misanthropy ye demokrasi hupenyu / VDMO / PixelHELPER
PixelHELPER inotsigira chikumbiro kurwisa mishonga yekuuraya zvipuka
Chirevo chechiedza naJan Böhmermann paDresden Frauenkirche
Nguva dzeMalta, chiedza chakafungidzirwa chemutori wenhau akafa Daphne Caruana Galizia
Imp News, pamwe nevekwaKurdish nharaunda, isu takaziva chiedza chakayerwa kuBellevue castle.
A. Gomringer akaburitsa ratidzo yedu papeji rake
Deutsche Welle Arabic: Chiedza chinofungidzirwa cheMercator Foundation chinopesana neIslam
Meydan.TV light projekta pamumiriri weAzerbaijan
Spiegel Online: Chiedza chinofungidzirwa kuburitswa kwaCharles Puigdemont
Taz: Chando chakavharidzira maJan Böhmermann
OVB Online: Chiedza Mimiro kuFederal Intelligence Service muBab Aibling
Berliner Morgenpost: Chiito chinopesana nesarudzo dzisiri dzekutonga muTurkey
Bildzeitung: Chiedza chinoratidzwa kumumiririri weTurkey
ntv: Chiedza chinofungidzirwa kupokana nekushandiswa zvisiri pamutemo kweRedot ziviso neTurkey
Chiedza chinofungidzirwa kuburitswa kwaDeniz Yücel
Goood: Ingo kugadzirisa nyika
Berliner Zeitung: Kuratidzira kunopesana neSaudi Crown Prince
Mwenje weprojekiti yemapurisa station yaOury Jalloh
Sleaze Magazine: Chiedza chinoratidza kusvika kuEmbassy yeNorth Korea
Sputnik: Chirevo cheMwenje pane iwo meseji kubva kuRussia neUSA
Tagesspiegel: Chiedza chakayererwa chesarudzo muTurkey
Yazvimirira UK: Chiyedza chinowoneka pamumiriri weTurkey
Sputnik: 9 / 11 Bank inopenya paEmbassy yeSaudi Arabia
Deutsche Welle: Chiyedza chinoratidzira kumumiriri weSaudi
Farben Kreul: Mufananidzo wemu Artist nezva Oliver Bienkowski kubva kuPixelHELPER
franceinfo + afp: Chiedza chakadzvanywa Daesh
Uyezve Kerkeling inogovera mwenje wepurojekiti naPixelHELPER
Zuva Nezuva Mirror: Daesh Bank paSaudi Embassy
Sputnik: Erdogan ane ndebvu dzaHitler uye ruoko rwake nehafu mwedzi
Sputnik - chiyedza chakayereswa pane amburenzi yeTurkey
Stern, varatidziri vanosheedza nhetembo yaEdogan paMumiriri weTurkey
Tagesspiegel, PixelHELPER kurara mabhokisi evasina dzimba
Artnet ndeimwe yemapuratifomu akakura epasi rese.
Broadcasting yeSwitzerland: ECB yabuda pabasa
Chirevo chechiedza muNeiss Grevenbroicher Zeitung
Berliner Morgenpost: Pausiku hwerufu takamirira Helmut Schmidt kudzimbahwe rePSD.
Berlin est a nous: Chiedza chinofungidzirwa Daesh Bank
Chekutanga: Dr. Oetker Zvitoro zvisina marara
Kai Thrun: blogger nezve livestream swarm rubatsiro
Kurier Austria: Chiedza chinoratidzwa kuUS Embass
Märkische Allgemeine über PixelHELPER: Vapoteri Vanogamuchirwa muNauen
NRW Zvino: Tonga vabatsiri pamhepo uye zadzisa mazuva akanaka
APA: NSA mu da House kuVienna UNO Guta
Spiegel Online: ECB kubva pakuita
TedX Talk muMarrakech naPixelHELPER Oliver Bienkowski
Nhau Dzepasi Pose: Chiedza chinoratidzira kupikisa potash munyu
Urbanshit: Chiedza chinofungidzirwa kupesana nezvombo kudzvanywa naDkt Ing. Oetker
Chirevo ne37 ° ZDF nezvePixelHELPER
Iye zvino: Chiedza chinofungidzirwa paUS Embassy kupokana neaya waya
TheVerge: Chiedza chinofungidzirwa kupesana neNSA
Buda uye uzviratidze iwe: Kubva kubhegi bhegi kuenda kuhuwandu hwevanhu
Spiegel Online Nyika Dzese: Chiedza chinosarudzika chaKim Dotcom
Muvambi wePixelHELPER mune SPIEGEL
Reuters inoshuma pamusoro pePixelHELPER
Sueddeutsche, Feuilleton mediahacking kune vasina pekugara
Kuiswa kwechiedza neBismarck Foundation pane Bismarck shongwe
Stern: Kuiswa kwechiedza pane Hypo Real Estate
Deutsche Welle pane reverse graffiti
Augsburger Allgemeine nezve Hypo Real Estate
Kubatira pamwe neUshumiri yenzvimbo dzekumaruwa muBW
Kuiswa kwechiedza paMutambo we Mwenje
Yakajeka panzvimbo yebhurawuzi, yakajeka kupenengura kubva kurudyi-bapiro radicalism
Muvambi wePixelHELPER International, Attac's 2009 yakahwina mubairo "Tangidza Yako Yega Shanduko". Kubva ipapo, akaita zvese musimba rake kuita 10 makore anotevera mubatanidzwa unoshanda pasi rese. Chinotarisa pane zvirongwa zverusununguko rwehunyanzvi, kodzero dzevanhu uye Anti-Semitism
Attac: Mubairo "Tangidza yako pachako shanduko"
HNA Kassel: Mabhokisi ekudzivirira
Kugadziriswa kwechiedza paPariser Plaz kugedhi reBrandenburg
Frankfurter Rundschau: Zvikumbiro zveVagari pahurongwa
Mhemberero yemubhadharo wakaitwa neacac kune muvambi wePixelHELPER
Otto Kettmann: Limburg 2013 Anatome yeanotsikisa
Eric Mülling: Big Data uye Dhijitari Kusateerera
Monika Mühlpfordt - Chirevo sedzinza rechitubu
Vaya avo vanofunga zvakasiyana-siyana kuchinja nyika
Asi yedu hasha zvinonzwisisika, tichifunga zvatakatambura. Chii chatakafanira kuita isu? vanasekuru Kutora tei yei Zvikuru zvekuKeylon?
Chii chatinazvo vabereki on the Cotton minda yakaurayiwa kune vaIndia, uye varombo Saxons mu Copper naColtan migodi pedyo neDresden, kuitira kuti Congolese 30 midziyo yemagetsi pamhuri vane.
And the Kakao uye Kofi minda muPalatinate! Zvizvarwa zvePalatine zvine zvavo Utano hwakaparadzwa kune avo vakaipa African corporations. And the Mashove eSomaliya mafambisi ayo akachera muGungwa reNorthwa risina chinhuNdokusaka vazhinji vaifanira kuenda ikozvino East Frisian pirates kuva.
Anenge zvose Nzou dzedu dzakamurova, nokuda kwake Chess michina uye piano maki, Iye zvino unouya ne jeeps uye unoita safari uye tarisa iyo nzou dzokupedzisira muBavarian Forest pamusoro. Izvo zvakaoma.
Und kudzoka apo Herero akarwisa Germany, uye iyi Kutambudzwa kwakaitwa nevaSadia, Izvo zvinoshanda zvakare. Chimwe chinhu chakadaro, haufaniri kugogodza kunze kwepfeko, Inoramba ichirwadza mushure memakore 100Iwe haugoni kudzoka zvakare nokukurumidza.
Takamira pano kumabvi edu zvinoparadza makemikari, saka iwe unogona muBangladesh nokuda kwe7 Euro Jeans anogona.
Vangani vevasikana vedu takafirwa mukati Diamond migodi ku Bielefeld, kuitira kuti Kunoona muSierra Leone anogona kuimba "Daimondi Ndiyo Shamwari Yakanakisisa Yevasikana ", Iye zvino vava kuuyawo kuMediterranean uye vachiri kuda kurarama mumatambudziko edu.
Hongu, chii chimwe? Chii chimwe chatinofanira kukuitira? Pane imwe nguva, yava kupfuuraPane imwe nguva hatigoni kuita zvakawanda! Pane imwe nguva, hakuzovi nezvimwe!
yedu Mwoyo uri kure, asi mikana yedu ndeyekupedzisira.tichinoita senge fomu yekuzvivimbisa pachako mumweya weMuvheneko. Mitezo yedu inoratidzira mikana yeunyanzvi sesimba rechishanu munyika. Nekudaro, hunyanzvi hachisi girazi rekuti munhu akasunga zvinhu sezvazviri, asi sando nyundo iyo imwe yaanoigadzira, inobatanidza, uye nokudaro inoita kuti vanhu vadzokere zvishoma kuupenyu hwakajairika.
Muvambi wePixelHELPER Oliver Bienkowski ane Moroccan mumugwagwa imbwa ET
Pfupiso diki yezvakasiyana zvePrexelHELPER zviito
Zviwanikwa zvePixelHELPER August 19th, 2020Oliver Bienkowski